Thinklab - Fananganana ekipa fanombohana hanamboatra siansa sy governemanta
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Thinklab - Fananganana ekipa fanombohana hanamboatra siansa sy governemanta
Febroary 17, 2017
Ny maodely dia miresaka momba ny famandrihana ny modeliny farany, modely WordPress atin'akanjo ao amin'ny fanentanana farany marika Perfectly Fit, izay notifirin'i Lachian Bailey. Fotoana tsy nampoizina toy izany no nihiaka hoy izy.
Ny zava-dehibe tsy maintsy tadidinao amin'ity dia ity dia ny tsara fanahy amin'ny rehetra fotsiny ary mitsiky foana.
Karazana mampisafotofoto izany satria zazavavy lehibe kokoa aho, hoy i Dalbesio. Tsy izaho no zazavavy lehibe indrindra eny an-tsena fa tena lehibe kokoa noho ny zazavavy rehetra [Calvin Klein] niara-niasa tamiko aho, ka tena nampatahotra izany. Tsy azony antoka, hoy izy momba ny fitifirana, izay antenaina aminy raha ny habeny na ny bikany.
Mamelombelona, ​​ny nandrasana taminy dia ilay zavatra nandrasana tamin'i Lara Stone ihany: haka sary tsara tarehy.
Tsy mahazo aina ny fihetseham-po, rehefa ekena, miakatra, mikotrana ary latsaka anaty andiana onja.
Tsy maintsy mianatra zavatra iray ianao. Izao tontolo izao dia natao malalaka. Avelao ny tontolo hafa afa-tsy ny misy anao.
Tsotra tokoa, nefa tena ilaina tokoa, ny lobaka fotsy no fototry ny fitafiana rehetra. Izy io ihany koa no singa miasa maro an'isa indrindra, mitondra anao amin'ny asa hilalaovana ny bokotra fanalana bokotra roa. Tsy maninona izay fomba fanao amin'ny sipany sns, na amin'ny lamba vita amin'ny landy na landy mavesatra aza, mifanaraka amin'izay mety amin'ny fombanao manokana.
Calvin Klein fantatra amin'ny fandefasana ny asan'ny svelte toy izany modely toa an'i Brooke Shields sy Kate Moss handefa maodely izay mivaona amin'ny fenitra habe ary manahirana azy amin'i Dalbesio izay nandany taona maro.
tokony hanazava aminao ny fomba fiheverana diso momba ny fanamelohana
Teraka ny fahafinaretana sy ny fiderana ary omeko anao ny kaonty feno
ny rafitra ary hazavao ny tena fampianarana
mpikaroka ny fahamarinana lehibe, mpanorina ny fahasambaran'ny olombelona.
Adderall ary ny filalaovana bulimia tamin'ny fiezahana hamosaviana ny tenany mba hisolo tena ny fandrosoana dia namoaka ity fampielezan-kevitra ity ary toa an'i Whoa no nijery an'ity tovovavy miampy habe amin'ny fampielezan-kevitray ity mba hiara-milalao amin'ny bokotra roa tsy voatanisa.
Ataovy ny fanovana tianao ho hitan'izao tontolo izao
Navotsotr'izy ireo aho tamin'ity fampielezan-kevitra ity niaraka tamin'ny olon-drehetra izay tsy nisy fanavahana. Tsy fizarana misaraka ho an'ny tovovavy miampy habe hoy izy.
Nisy fotoana tao amin'ny indostria tsy ela akory izay, izay toa nampiasa modely miampy habe ny tontolon'ny lamaody avo lenta ho toy ny tsikombakomba iray mitazona ny lohateny Vogue italiana fonony ahitana an'i Tara Lynn, Candice Huffine, ary Robyn Lawley tamin'ny Jona 2016.
Related: Kalandrie mahazo ny maodely voalohany miampy habe 2016
Raisiko am-pelatanako izao tontolo izao
Nisy izany tsara tarehy izany Vogue italiana tantara sy ny zazavavy izay tao izay niafara tamin'ny fanaovana tena tsara ny kiraro dantelina mahazatra dia marina.
Mahatsiaro ho toy ny iray minitra aho, nanomboka nahatsapa an'ity miampy habe ity aho fa tsy mahia mba hiaraka amin'ireo tovovavy mahia dia tena fironana.
Nilaza i Dalbesio fa handroaka kiraro iray izay hiasa mafy indrindra, ka tena mampatahotra.
WordPress lalao sarotra satria samy te ho tsara amin'ny lamaody ny rehetra.
Ankehitriny, Dalbesio dia somary manantena ihany ny habeny amin'ny indostrian'ny modeling ma quande lingues coalesce. Amin'ny afovoany Occidental raha ny marina dia nilaza izy fa tsy ampy mahia.
Hitady ny toerako. Nihidy izy, tsy fantatro ny momba ny làlambe na izany aza, sarotra izany. Tsapan'ny rehetra ny antony ilana fiteny iraisana iraisana: afaka mandà tsy handoa mpandika teny lafo vidy ny tsirairay.
Ny sambo dia azo antoka ao amin'ny seranan-tsambo, saingy tsy izany no ilain'ny sambo
Mpanjifa Julien Macdonald tsy mipetraka eo an-joron'ny efitrano iray, izy no efitrano fampiantranoana nihomehy ny mpamorona azy rehefa nihaona taminy izahay omaly tolakandro mba hahita ny sambany voalohany. Tsy saro-kenatra ny sombiko. Izy io dia glamoration karipetra mena feno.
Tsy voatery hitondra azy ireo any amin'ny fivarotana lehibe ianao amin'ny asabotsy maraina miaraka amin'ireo ankizy, fa mety amin'ny akanjo firavaka ihany koa.
Ireo olona ireo dia manana fankasitrahana, fahatsapana ary fahatakarana ny fiainana.
Manomeza rojo rojo avo-wattage, voaravaka kavina sy krystaly sakazy saka saka saka, saka kavina mitete, ary mpivarotra fanambarana mahavariana avy amin'ny zavamaniry safari.
Ny olona tsara tarehy indrindra fantatsika dia ireo:
hazavao aminao ny hevitra fanamelohana rehetra momba izany
teraka ny fahafinaretana sy fiderana
mpikaroka ny fahamarinana lehibe
Raha maka ohatra tsy dia misy dikany, iza amintsika no manao fampihetseham-batana miasa mafy, afa-tsy ny mahazo tombony amin'izany? Fa iza no manan-jo hitady tsiny amin'ny lehilahy misafidy ny hankafy fahafinaretana tsy misy vokany manelingelina, na olona iray misoroka fanaintainana izay tsy miteraka fahafinaretana miteraka?
Etsy ankilany, manameloka antsika amin'ny fahatezerana marina sy ny tsy fankasitrahana lehilahy izay voafitaka sy maloto noho ny firavoravoana amin'izao fotoana izao isika, izay jamban'ny faniriana, ka tsy hitan'izy ireo mialoha.